Redmi ga-eweta Smart TV mbụ ya na Ọgọstụ 29 | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Ngwaọrụ ndị ọzọ, Xiaomi
Redmi abụrụla otu n'ime ụdị ndị kachasị arụ ọrụ taa, nwere ọtụtụ ekwentị nwere ama, na ụfọdụ n’ụzọ. Mana ika a agaghi elekwasị anya na igwe, ebe obu Anyị amarala maka izu na ha nwere Smart TV na-aga, nke emechara ka a mara ọkwa ya.
Otu onwa a Anyị nwere ike ịmata Redmi Smart TV na eze, nke mbụ a ga-amalite n'okpuru akara a. Ọ bụ ezie na ugbu a ọ bụ naanị ịmalite ya na ahịa na China ka akwadoro. Mana anyị amatala ụfọdụ nkọwa gbasara ya.
Ngosipụta nke Redmi Smart TV ga-eme na August 29. Ọ ga-abụ otu ihe ngosi maka ekwentị ọhụrụ gị, Redmi Rịba 8, dị ka ekwenyela na awa ole na ole gara aga. Ya mere, akara ndị China ga-ahapụrụ anyị ọtụtụ akwụkwọ ọhụụ na mmemme a na njedebe nke ọnwa a.
A na-atụ anya na a ga-enwe ọtụtụ ụdị n'ụdị nha. Ruo ugbu a Ekwenyela na a ga-enwe 70-inch, ọ bụ ezie na e nwekwara okwu nke ọzọ 40-anụ ọhịa. Ya mere anyị nwere ike ịnwe ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ site na nke a. Usoro ahụ ga-adị ka nke Xiaomi telivishọn.
Enweghi ọtụtụ nkọwa ndị ọzọ banyere nke a Redmi Smart TV. A na-atụ anya inwe mkpebi 4K. Na mgbakwunye inwe nkwado maka HDR na Dolby + DTS Audio. Mana nke a bụ ihe ekwenyebeghị ruo ugbu a, mana enwere ịkọ nkọ na asịrị na enwere banyere TV a.
Ndi chere adighi kwa ogologo na nka. Na August 29, a ga-egosi Smart TV mbụ nke akara Redmi. Anyị nwere ike ịmara mgbe ahụ ma a ga-ebunye TV a na Europe. Ọ bụ ezie na telivishọn nke ika ọ dịtụbeghị mgbe ha nọrọ na ahịa Europe ruo ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwaọrụ ndị ọzọ » Redmi Smart TV enweela ụbọchị ngosi
OnePlus 7T na 7T Pro wepụtara ụbọchị na ọsọ ọzọ